Nzira yei injini yekutsvaga inounza hupenyu hwehupenyu
Munyika yekutengeserana kwema digital, pane nzira dzakawanda dzokuti vatengesi vepawebhuku vanogona sei kukwezva magwagwa kune webvhodhi yavo. Pasina mubvunzo, tinosiyana. Isu tinogona kukwezva kwete kungofanana kwehupenyu (kutsvakurudza) motokari, asiwo kubhadhara, zvekugarisana uye kutumira. Zvose izvi zvinotengeswa zvinogona kuvandudza nzvimbo yako yewebsite rankings. Zvisinei, zvinokonzerwa (kutsvaga) injini yemigwagwa inoratidzika mutungamiri webhusaiti yehusaiti sezvo ndiyo yakakosha uye yakashandurwa. Motokari yehupenyu inoendesa vanopfuura 50% yevashanyi vose kune e-commerce web mabhuku uye mabhuku. Ndicho chikonzero basa redu guru nderekukwezva vashanyi vane hanya vanobva kutsvaga uye kuvashandura kuti vatengi vatengi vatengi. Zvechokwadi, zviri nyore kutenga motokari kudarika kuhuwana muhupenyu. Zvisinei, vashandisi vane zvakawanda kuvimba kune mawebsite anoiswa panzvimbo ye TOP yekutsvaga kwehupenyu. Uyezve, magetsi anowanikwa zvakanyanya kunangwa kupfuura kubhadhara uye ane mikana yakareba kwenguva refu. Muchikamu chino, tichakurukurirana nenzira ipi yatinogona kutanga kutora motokari kubva kutsvaga injini.
Ndezvipi zvikonzero zvekuwana bijini search engine traffic?
Nhamba yakawanda yekubatsira kuwana vashandi vanouya panzvimbo yako kubva kune zvitsva zvekutsvakurudza. Icho chinoreva kuti vanhu vose vanoisa muGoogle search box mashoko ezvo nekutsvaga kwekutsvaga mhinduro vanowana zvitsva zvekugadzirwa kwehupenyu. Kana webhusaiti yako yehutano inowirirana nevanoshandisa vashandi vavariro, inonyanya kuitika pawebsite yako uye kutendeukira kuva vatengi vako kana vatengi. Kutsvaga kwehupenyu kunobatsirawo pakubhadhara sezvo vashandi vachaona mamwe matanho anobva mubvunzo wavo. Saka, nguva dzose inobatsira kuwana magwagwa kubva pakutsvaga kwehupenyu kana zvichiuya pakuunza mari kubva kune zviziviso uye mapurogiramu akabatanidzwa. Rimwezve rubatsiro rwekugadzirwa kwehupenyu ndeyekuti iwe unogona kuderedza kuwedzera kwehuwandu uye kuvandudza ruzivo rwevashandi newebsite yako.
Kushanda nzira dzokuwedzera kutsvaga injini yekufamba
Ngatikurukurei dzimwe nzira dzinobatsira dzinogona kukubatsira kuti uvandudze nzvimbo yako yepawebsite, kusimudza nekukanda-kutarisa uye kuwana huwandu hunodiwa.
Kutsvaga injini yekugadzirisa
SEO inyanzvi yekugadzirisa maitiro chinangwa chikuru chekushandisa webhusaiti maererano nekutsvaga injini. Sezvo kutsvaga injini yakafanana neGoogle inonyanya kukoshesa ruzivo rwevashandisi neimwe nzvimbo yepaIndaneti, unofanira kuita zvose zvaunogona kuti ugadzire ushamwari-unofadza uye nyore nyore kuenda pawebsite. Uyezve, nzvimbo yako inofanira kunge yakave yakagadziriswa inoshandiswa nemubvunzo wevashandi. Kune marudzi maviri eSeO-off-page uye pane-peji. Paji-peji rinogona kunyatsotungamirirwa newe iwe SEO nyanzvi dzako. Zvinosanganisira kunyora kugadzirisa, kutsvakurudza kwemashoko makuru, mazano ekugadzirisa kushanda uye webhusaiti yekuvandudza navigation. Pasi-peji SEO inoumba nzvimbo yepamusoro mumaziso ezvinjini. Iwe unofanirwa kuumba mukunda wekuvakwa kwekubatana kwekugadzirisa kushandiswa kwewebsite rankings uye kuita kuti webhu yako inowoneka kuSERP. Uyezve, unofanirwa kuve nechokwadi chekuti nzvimbo yako inoputika nekutsvaga bots kuti uwane mamwe majini injini. Kuti uone kukoshesa kwako kugadzirwa kubudirira, unogona kushandisa Google Analytics tool uye Semalt Web Analyzer.
Kugadzirwa kwehutano ndiyo nzira yakakwana uye yakajeka yekukwevera zvakasikwa zvekutsvaga injini. Chinobudirira chekubudirira mukugadzira zvinyorwa zvakanyanya ndechokugadzira zvigadzirwa zvevashandisi, kwete yevanjini. Zvinyorwa zvepawebhuku rako zvinofanira kuva zvakakosha kune izvo vatengi vangave vakatarisa. Iwe unofanirwa kupa vashandi vako nyanzvi maonero pamusoro pehurukuro yavanoda mukusimudzira nzvimbo yako mukurumbira nekuvimbika kwavo kune marashi yako. Iva nechokwadi chekuti zvinyorwa zvako zvakasiyana, zvakakosha uye zvisingabviri. Uyezve, shandisa mamwe mazwi mairi mukati mawo, kunyanya muzvinyorwa zvekutendera bots bots nyore nyore kutarisa nzvimbo yako Source .